Fahasalamana ho an’ny rehetra : Nifanome tanana ny Telma sy ny “Min Santé” -
AccueilSongandinaFahasalamana ho an’ny rehetra : Nifanome tanana ny Telma sy ny “Min Santé”
Fahasalamana ho an’ny rehetra : Nifanome tanana ny Telma sy ny “Min Santé”
23/02/2018 admintriatra Songandina 0
Efa miditra tsikelikely amin’ny fampiharana ny rakotra ara-pahasalamana ho an’ny rehetra, na ny “couverture santé universelle” i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Manomboka mirotsaka tsikelikely manaraka izay ihany koa ny fanampiana entin’ireo orinasa. Isan’ny nandrotsaka fanampiana amin’izany ny orinasan-tserasera Telma. Ny “caisse nationale de solidarité santé” moa dia kitapom-bola eo ambany fiahiana sy fitantanan’ny minisiteran’ny Fahasalamana mba handraisana an-tanana ny Malagasy manoloana ny fiatrehana ny karazana aretina sy fitsaboana isan-karazany. Satria ny 8 isan-jaton’ ny Malagasy ihany hatreto no afaka misitraka fiahiana ara-pahasalamana avy amin’ny “assurance”, nefa 41 isan-jato amin’ny fandaniana anatin’ny tokantrano iray dia natokana ho an’ny fitsaboana avokoa.
Ny “caisse nationale de solidarité santé” izany, izay handraisan’ny rehetra anjara amin’ny fomba kely sy bitika indrindra, dia hahafahan’ny tsirairay misitraka fiahiana ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy, ary kendrena ao anatin’izany ny vahoaka malagasy 25 tapitrisa.
Noho izany, hiompana manontolo amin’ny fampahafantarana ny aretina isan-karazany, fanomezana torohevitra ara-pahasalamana, fanatsarana ny fomba fiainana ho antoky ny fahasalamana sy ny maro hafa ny fiaraha-miasan’ny minisitera sy ity orinasa mpandraharaha finday iray ity, ka ho jifain’ny tsirairay amin’ny vidiny mora indrindra ireo tolotra ireo ka ny vola azo amin’izany no entina hamenoana sy hanampiana ny ao amin’ny “caisse nationale de solidarité santé”. Hahazo tombony ny mpanjifa satria hahazo ny vaovao rehetra ilainy momba ny fahasalamana ka afaka hiatrika am-pilaminana izay ho olana, ary tombony ho an’ny Malagasy rehetra ihany koa satria misy vola voaangona hanampiana ny rehetra amin’izay mety ho fahasahiranana ara-pahasalamana.